सनम शाक्य र आशिष रञ्‍जित जो विमानको झ्याल फुटाएर बाँचे... !
ARCHIVE, SPECIAL » सनम शाक्य र आशिष रञ्‍जित जो विमानको झ्याल फुटाएर बाँचे... !
युएस बांग्ला एयरको विमान दुर्घटनाका २७ यात्रुहरुलाई उपचारका लागि भन्दै सिनामंगलस्थित काठमाडौँ मेडिकल कलेज लगिए पनि ८ जनाको पहिल्यै ज्यान गइसकेको अस्पताल स्रोतले जानकारी दिएको छ। प्राप्त जानकारी अनुसार बंगलादेशबाट चालकदलका ४ सहित ७१ यात्रु लिएर काठमाडौँ आएको विमान अवतरणका क्रममा धावनमार्गबाट पर उछिट्टिएर आगलागीमा परेको थियो।
यता दुर्घटनामा पाटनका सनम शाक्य र आशिष रञ्‍जित भने विमानको शिशा फुटाएर बाँच्न सफल भएका छन् । सनम शाक्यका परिवार सदस्य राजीव शाक्यले दिएको जानकारी अनुसार उनलाई उपचारपछी घर फर्काउने तयारी भइरहेको छ । उनी बाँचेको खबर संगै उनका आफन्तहरु खुसी भएका छन् । उनी ट्राभल एजेन्सीमा काम गर्छन् ।
दुर्घटनाबारे आएको प्रारम्भिक जानकारी अनुसार विमानस्थलको टावरले युएस बंगला जहाजलाई दक्षिणबाट अवतरण गर्न अनुमति दिएपछि पाइलटले उत्तरबाट जहाज ल्याएका थिए । यहि कारण विमान दुर्घटना भएको थियो । दुर्घटनामा परी बिनोद राज पौडेल, बसन्त बोहोरा, सोनाम शाक्य र आसिश रंजित दुर्घटनामा परेका छन् । यी ४ को नाम बाहिर आएको छ । अन्य ३० जना नेपालीहरु पनि उक्त विमानमा थिए । आधा दर्जन बढी नेपालीको मृत्यु भएको खबर छ। जहाजका ७१ यात्रुमध्ये २८ जनाको मात्र उद्दार गरेर अस्पताल लगिएको पर्यटन सचिव कृष्ण देवकोटाले जानकारी दिएका छन्।